Xaaladda magaalada Gaalkacyo oo saaka degan – Radio Muqdisho
Xaaladda magaalada Gaalkacyo oo saaka degan
Xaaladda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo shalay lagu dagaalamay ayaa saaka dagan.
Wariyaha Radio Muqdisho uga soo warama gobolka Mudug C/risaaq Maxamed Axmed oo ku sugan Gaalkacyo ayaa sheegay in saaka xaaladda magaaladaasi ay degantahay oo aan la maqleynin rasaas balse ay ishorfadhiyaan labada ciidan.
Dadka ku nool magaaladaasi ayaa walaac xooggan ka muujinaya sii socoshada dagaalkaasi, iyadoo dagaalladii shalay ay saameeyn ku yeelatay ganacsigii magaalada waxaana hakad galay isu socodkii gaadiidka.
Waxgaradka iyo culumada ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegayaa in ay wadaan dadaalo dheeri ah, oo ay ku doonayaan in lagu hakiyo colaadda.
Ciidamada Kenya oo saaka howlgallo ka wada degmada Mandera
Hey’adda culumada Soomaaliyeed oo baaq nabadeed u diray dhinacyada ku dagaalamay Gaalkacyo
Hey'adda culumada Soomaaliyeed oo baaq nabadeed u diray dhinacyada ku dagaalamay Gaalkacyo